Mitsangana ny tsena «divay tranainy», mampiseho ny fahaizany miady amin'ny lozam-pifamoivoizana RFID | Toptag
“Tao anatin'ny folo taona lasa, tena nahatsiaro ho lalina aho. Ny toaka dia nisolo ny divay mena tamin'ny sakafo hariva natokana ho an'ny mpandraharaha. Tao anatin'izay roa na telo taona lasa izay dia miharihary fa ny alikaola dia manavaka ny toaka taloha amin'ny toaka hafa. Ny toaka tranainy dia afaka mitantara tantara misimisy kokoa. ” Ny talen'ny PAX sy ny talen'ny mpikaroka, Hu Run, dia nanonona fiovana vitsivitsy teo amin'ny tsenan-toaka.
Sokafy ny APP raha hamaky ireo tatitra farany. Any Sina, ny fitsidihana havana sy namana ary fitsidihana fialamboly dia tena ilaina amin'ny kolontsaina divay. Miaraka amin'ny fanatsarana ny fari-piainan'ny olona, ​​miova tsy tapaka ny takiana amin'ny kalitaon'ny divay. Tao anatin'izay taona lasa izay, ny "fisotroana divay taloha" dia nanjary malaza Up.
Ny divay taloha no tadiavin'ny tsena, ary lafo ny vidin'ny famantarana ny tena manokana
Ilay antsoina hoe divay taloha dia divay efa notahirizina efa ela, toa an'i Moutai, folo taona mahery lasa izay. Miaraka amin'ny "fanavaozana ny fisotroan-toaka" ny alikaola, nanjary eken'ny mpanjifa hatrany ny divay taloha, ary nanjary nalaza tsikelikely ny fiheverana ny "divay taloha = divay tsara". .
Vao tsy ela akory izay, ny Hurun Research Institute dia namoaka ny "Taratasy Fotsy fotsy divay taloha any Chine" tamin'ny taona 2020. Araka ny angon-drakitra tao amin'ny taratasy fotsy, 87% amin'ireo mpisotro zava-pisotro mahadinadinina be dia be no nilaza fa tian'izy ireo ny divay taloha, ary ny 84% dia nilaza fa manana fahavononam-po fatratra hividy. "Ny" fisotroana divay taloha ", ity fanovana hevitra ity dia nampiroborobo hatrany hatrany ny fanitarana ny tsenan'ny divay taloha. Araka ny tatitra "Index Old Market Market Old China" dia antenaina fa amin'ny 2021, ny haben'ny tsena divay taloha dia hihoatra ny 100 miliara.
Ny fankatoavana ny mpanjifa sy ny firoboroboan'ny mari-pahaizana dia tsy vitan'ny hoe mahasoa ny sokajy "divay taloha", fa mitondra fanamby sasany ihany koa amin'ny tsenan-divay taloha. Ny iray amin'ireo fanamby lehibe indrindra dia ny fomba ahafahan'ny mpanjifa mividy divay tena antitra amin'ny fahatokiana.
Taloha, mpanao heloka bevava teo amin'ny tsenan'ny divay taloha dia nampiasa endrika isan-karazany mba hanahaka ny divay sandoka hahazoana tombony be. Ho fanampin'izay, ny isan-karazany amin'ny famiazam-boaloboka sy ny famerimberenana famonosana matetika dia nitombo ihany koa ny vidin'ny famantarana manokana ny divay taloha. Raiso ohatra i Moutai. Vao tamin'ny taon-dasa, ny mari-pamantarana dimy "Moutai divay nasionaly" amin'ny fonosana sy ny kojakojan'ny vokatra Moutai vaovao dia nosoloina ny mari-pamantarana "Kweichow Moutai". Tsy isalasalana fa izany dia hiteraka famantarana famantarana diso ho an'ireo mpanjifa izay matetika tsy mifandray amin'ny divay taloha.
Mba hamahana ity olana ity ary hampiroborobo ny fampandrosoana ara-pahasalamana sy milamina ny indostria, ny teknolojia fanaraha-maso ny fanaovana hosoka amin'ny sandoka dia nandray andraikitra lehibe.
Ny rojo manakana manohitra ny fisandohana sandoka, ny divay taloha koa dia mila nomerika
Raiso ohatra i Moutai. Amin'ny maha marika zava-pisotro misy alikaola / divay tranainy indrindra azy dia efa betsaka ny "tutorials" amin'ny Internet hanampiana ny mpanjifa hamantatra ny maha-azo itokiana ny divay taloha, toy ny fijerena ny antsipirian'ny tavoahangy, ny famehezana ny fehikibo vita amin'ny fingotra ary ny fanaovana sandoka. Boky torolàlana sy fomba ivelany hafa, fa ity fomba fanondroana ivelany ity amin'ny maso mitanjaka dia tsy azo ihodivirana fa hanana fotoana "totohondry maso", noho izany ny famantarana amin'ny alàlan'ny teknika dia zava-dehibe indrindra.
Mikasika ny famaritana an'i Moutai dia noraisina tsara ny rafitra manara-dia manohitra ny fanaovana sandoka izay natomboky ny Kaominin'i Maoyou sy ny Fikambanana Fikarohana ara-kolontsaina Beijing Moutai. Maoyou Commune dia sehatra fifanakalozana eken'ny fahalalana Moutai, ny famantarana azy ary ny kolontsaina fanta-daza eo amin'ny faribolan'ireo namana Maoyou. Ahoana no ahafahan'ny teknolojia manampy ny mpanjifa hamantatra divay taloha? Azontsika atao ny mahita topy maso ny rafitra fanaraha-maso manohitra ny fisandohana amin'ny Kaominin'i Maoyou.
Raha tsorina, ny rafitry ny fidirana an-tsokosoko hanohitra ny sandoka dia midika fa ny tavoahangy Moutai tsirairay avy dia samy manana ny "kara-panondrony" manokana, izay mirakitra ny fampahalalana fototra momba ny tavoahangin'i Moutai, toy ny taona, fiaviana, sns., Izay azo fantarina amin'ny alàlan'ny kaody scanning sy chips RFID. Fomba hanamarinana ilay divay taloha.
Miorina amin'ny fahafaha-mitrandraka anti-sandoka nentim-paharazana, ny Maoyou Commune dia mampiasa teknolojia nomerika hanatsarana ny rafitra fitadiavana anti-sandoka. Voalohany indrindra, ny Maoyou Commune sy ny JD Digital Co., Ltd. dia nametraka sakana iray tao amin'ny rafitry ny traceability anti-counterfeiting "See Zhen". Teknolojia rojo, ny fanapariaham-pahefana, ny fisokafana, ny mangarahara, ary ny tsy fanelingelenana ny teknolojia blockchain no mahatonga ny teknolojia traceability anti-counterfeiting azo itokisana kokoa.
Ho fanampin'izany, ny Kaomina Maoyou sy ny kaody loharano namboarina ihany koa dia nohatsaraina tamin'ny alàlan'ny fanavaozana ireo sticker eo am-boalohany ho an'ny sticker sticker RFID. Ny kinova vaovao amin'ny sticker dia sarotra kokoa ny maka tahaka azy, izay mampiakatra ny vidin'ny fanaovana hosoka. Mikasika ny lozisialy, ny "See Zhen System" dia namorona rafitra fitantanana fizarana trano fivarotana lozisialy WMS + ihany koa, ary mazava kokoa ny fizotry ny fizarana toaka Moutai rehetra.
Tamin'ny alàlan'ny haitao nomerika sy ny fametrahana ny rafitra fitadiavana anti-sandoka amin'ny ankapobeny, ny zava-pisotro misy alikaola Moutai namidin'ny Kaominin'i Maoyou dia nahatratra "tena izy" sy "azo zahana". Ho an'ny mpanjifa dia tsy mila mamono finday fotsiny izy ireo ary manitsy ny kaody hahafahany mividy ny divay taloha tiany amin'ny fahatokiana ary hianatra momba ny mombamomba ny divay mifandraika amin'izany.
Nipoaka ny indostrian'ny divay taloha, ary nanampy ny indostria hivoatra am-pilaminana ny haitao
Na fisotroan-tena, fanomezana, na fampiasam-bola fanangonana, toa tsy mitsaha-mitombo ny sandan'ny divay taloha, ary ao ambadik'io fiparitahan'ny tsena io dia mbola mila tohanan'ny filaminan'ny tsena tsara izy io.
Ho an'ny mpanjifa, ny fisalasalana amin'ny fividianana divay taloha dia miankina amin'ny maha-azo itokiana sy loharanon'ny divay. Ny rafitra See Zhen natombok'i Maoyou Commune dia fanafihana marim-pototra amin'ireo teboka maharitr'ireo lafiny roa ireo. Mikasika ny famaritana azy, ny Kaomina Maoyou dia manana traikefa fikarohana Maotai maherin'ny folo taona ary antoka roa ho an'ny ekipa mpanombana divay manam-pahefana. Amin'ny resaka traceability, ny Maoyou Commune dia mampiasa teknolojia blockchain sy traceability hafa hampidirana sy hamerenany hanarahana ny mombamomba ny fizaran-divay mandritra ny fizotrany. Fanoratana sy fanodinana nomerika. Ny fampifangaroana ny maha-azo itokiana sy ny fitadiavana dia mamorona rafitra mihidy mihidy, izay manome fahafaha-manao ho an'ny mpanjifa manala ny fisalasalany amin'ny fividianana divay taloha.
Toy ny Maoyou Commune, izay mampiasa teknolojia nomerika hananganana rafitra feno maha-azo itokiana sy azo itadiavana divay tranainy Moutai, dia manome vahaolana azo antoka amin'ireo teboka fanaintainan'ny orinasa divay taloha nandritra ny taona maro, ary amin'ny lafiny iray dia mampiroborobo ny fampandrosoana ny iray manontolo orinasa. Mino ny ho avy aho. Ny teknolojia koa dia hanome antoka matanjaka ho an'ny fampandrosoana ara-pahasalamana sy milamina ny indostrian'ny divay taloha.